Kunomagazini owodwa engiwukhokhelayo: unentambo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 26, 2009 NgoMsombuluko, Januwari 26, 2009 Douglas Karr
Abangani bami bayazi ukuthi ngiyincwasimende yencwadi. Ngiyazithanda izincwadi ezinoqweqwe oluqinile. Akukho okufana nokuqhekeka komgogodla wentombi nephunga lekhasi elimnandi elinoyinki omusha kulo. Incwadi entsha izwa sengathi izwa njalo njengesipho kimi… futhi ingeyami, eyami yonke!
Ngisebenza ku-snobbishness yami ekhuni, noma kunjalo! Angikwazi ukuzibamba nginecala kuzo zonke izincwadi ezinqwabelene eduze kwendlu yami ezifanele ukufundwa abanye abangazimisele kangako ukukhwehlela intengo enoqwembe oluqinile. Ngizofika lapho, ngiyathembisa. Esikhathini esingangesonto noma ngaphezulu, ngizoqhuba umncintiswano ngiphinde nginikeze ibhokisi lama-hardcovers angafundiwe… aseplastikini wabo. Hlala nxazonke!
Noma kanjani… njengoba ngithanda ukuzwakala kwephepha, ngayeka ukufunda amaphephandaba eminyakeni eyedlule. Bengikhuluma no UJohn Ketzenberger, intatheli ye-Star Business (pun ehloselwe) ngayo ngesonto noma ngaphezulu edlule. Ngayeka ukuthenga iphephandaba lapho ubuntatheli buguquka kusuka kumkhiqizo kuya ekugcwaliseni phakathi kwezikhangiso.
Ngiyekile ukuthenga amaphephandaba lapho amaphephandaba eqala ukukhangisa ukuthi mangaki amakhuphoni uhlelo lwangeSonto ayenalo esikhundleni sezindaba ezingaki ababengaziveza. Kusangiphatha kabi. Ukube bekungekho kukholamu kaJohn, anginaso isiqiniseko sokuthi bengingaze ngifunde ngisho ne-Indianapolis Star online, noma.
Kusekhona incwadi eyodwa yokuphrinta engingakwazi ukulinda ukuthi ivuleke futhi ivuleke, kepha… futhi lokho Umagazini Onentambo. Ngayeka ukubhalisa eminyakeni eyedlule lapho beya ezithombeni ezinkulu, ukuphrinta okuncane… kepha iminyaka embalwa edlule ibe yinto emangalisayo. Akusekho fluffy wobuciko - yonke i-athikili ingukujika kwekhasi. Kunezinhlelo ezimbalwa kakhulu engingazidli kusukela ekuqaleni kuya ekhasini. Ngifunde emuva ngonyaka odlule futhi ngabona nokuthi ngibhuloga mayelana nama-athikili anentambo kanye njalo ezinyangeni ezi-2 kuye kwezi-3.
Umagazini Wired Wenyanga:
Ngaphakathi kweGPS Revolution: Izicelo eziyi-10 ezisebenzisa kakhulu indawo
IHhovisi likaMongameli Elinentambo: Ngabe u-Obama angaqala kabusha ngempela i-White House?
Iqhinga Lokubulala iGoogle
I-DNA ye-DIY: Ukuzama Kukababa Oyedwa Ukugenca Ikhodi Yofuzo Yendodakazi Yakhe
INkosi emnyama ye-Broadband izama ukulungisa isithombe sikaComcast
Njengoba lezi zihloko seziku-inthanethi, ngingakuphonsela inselelo enkulu ukuthi ufunde lezi zihloko. Uma usuku lwakho lugcwele ukufundwa kokuthunyelwe kwebhulogi futhi ungomunye walabo bantu ozibuza ukuthi kungani sisadinga izintatheli, noma iyiphi yalezi zihloko kufanele iguqule umqondo wakho. Ukunakekelwa nokubhala kufakwa kuleso nalezi zihloko kweqa ekhasini… er… kwesikrini.
Lapho ngicabanga ukuthi ngikhokha malini ngencwadi enhle enoqwembe oluqinile, nokuthi iMagazini Enentambo ibiza malini - ngiyazibuza ukuthi kungani ngingakhokhi imali ethe xaxa ngokubhaliselwe kwami. Awukho nomagazini owodwa emakethe odonsa ukunaka kwami ​​futhi obika kakhulu emkhakheni wezobuchwepheshe kanye naseWired.
Angikwazi ukulinda kuze kube Wired Wired ngenyanga ezayo!
Tags: imikhuba yokuthengaisu lokuxhumana
Jan 27, 2009 ku-3: 02 AM
Mina ngokwami ​​ngiyayithanda i-Wired kodwa ngiphinde ngaba nobuhlobo futhi. Njengamanje ngiyayifunda.
Jan 29, 2009 ku-2: 13 AM
Intambo iyona kuphela engibambelele kuyo futhi. Ngingumdlali wegeyimu noma kunjalo futhi ngithole i-Game Informer eminyakeni emibili edlule noma kunjalo, kepha lokho kungenxa yokuthi iza nekhadi lesaphulelo seGame Stop.
Jan 29, 2009 ku-11: 37 AM
Abafundi abajwayelekile bebhulogi yethu (www.inmedialog.com) bazokwazi ukuthi singabasekeli abanentshisekelo yokwenza kahle kwezobuntatheli noma ngabe yiphi ifomethi. Ngiyazwelana nalabo okumele baphathwe yiphephandaba lansuku zonke elisedolobheni lesibili noma lesithathu. kunjalo impela lapha e-Ottawa, eCanada, lapho isigqoko sendawo kuyicala elibi kakhulu lobunikazi bezinkampani zemidiya ukugijimela ezansi.
Sinenhlanhla, nokho, ngoba sinephephandaba likazwelonke eliphuma phambili nsuku zonke, iGlobe and Mail, elihlala emnyango wami ekuseni njalo ekuseni. Bekulokhu kufundwa ngaphambili nangasemuva empilweni yami iminyaka engaphezu kwengu-25 itholakale. Ibalwa njengenye yamaphephandaba amahle kakhulu esiNgisi emhlabeni.
Ukufunda i-Globe nsuku zonke kungishiya nesikhathi esiningi sezinye izimpapasho njengesiyaluyalu sakho sokuzivikela esibuhlungu, u-Douglas, kepha ngabelana nothando lwakho nge-Wired. Sekuwumagazini wami wokuqala wobuchwepheshe kusukela iBusiness 2.0 yangena ngaphansi. (Ungafunda i-obit yami ye-2.0 lapha: http://inmedialog.com/index.php/archives/a-business-20-titan-bows-out/Inezinto eziningi zamagajethi-ne-geek futhi ishaya kancane kune-2.0, kepha ukubhala kugqamile, izici zivame ukucwaningwa kahle futhi zicatshangelwe futhi lapho ngiqeda ngakho, zonke ukukhishwa kunamakhasi amaningi ekhasi abuyiselwe emuva ukungikhumbuza ukuthi ngihlole ngokuqhubekayo kunoma yini ebhalwe mayelana nalelo khasi.
Sithola inqwaba yamamagazini ahanjiswa ku-ejensi yethu ye-PR egxile kubuchwepheshe njalo ngesonto; Okunezintambo ukuphela kwabasebenzi abayaliwe kumele bafakwe etafuleni lami masinyane lapho ifika.
Jan 29, 2009 ngo-12: 24 PM
Ngisebenze neThe Globe and Mail cishe eminyakeni emi-5 noma eyisi-6 eyedlule futhi ngiyavumelana nohlolo lwakho. IGlobe, ngaleso sikhathi, lalikhathazeke kakhulu ngokufinyelela izilaleli ezilungile… Hhayi ukufinyelela nje kunoma ngubani ongathenga iphepha. Bagwema nezaphulelo futhi - konke lokhu kunikeze iphephandaba inani elibonakala kakhulu. IGlobe and Mail ingadlula iWall Street Journal njengephephandaba lebhizinisi elihamba phambili emhlabeni. Kuyiphepha elihle nenhlangano enhle!
Siyabonga ngokungeza engxoxweni!